TAPAKA NY FAMATSIANA SOLIKA ANY ANTSIRANANA : Misy mampiakatra saran-dalana sahady
Tsy afaka mamatsy solika ny ankamaroan’ny toby mpamatsy solika ao an-tampon-tanànan’Antsiranana nanomboka tamin’ny alahady teo. 6 novembre 2018
Mandeha sahady araka izany ny varotra maizina ary misy amin’ireo fiarakaretsaka « Bajaj » no mampiakatra ny saran-dalana. Mandeha ny feo fa misy antony politika izao toe-javatra izao. Mandiso izany resaka izany ny tompon’andraikitra iray ao an-toerana tafaresaka tamin’ny mpanao gazetinay.
« Nametra-pialana tampoka ny tompon’ andraikitra iray misahana ny famatsiana solika ireo toby mpamatsy solika fa tsy misy antony hafa akory » hoy izy. Nambaran’ity farany fa mety hiverina amin’ny laoniny anio ny famatsiana solika ao an-tampon-tanànan’ Antsiranana.